Blender "Vitek" - one of the best ethengisa amadivayisi ngaphambili ekhishini Imishini. Kungani edingeka kangaka ukuthola le mikhiqizo? Kodwa konke ulula. Okokuqala, abathengi bakhangwa intengo imali.
Le nkampani inikeza ezihlukahlukene amamodeli kuhluke design, amandla, izici sokusebenza. Chaza ibanga imikhiqizo kwesinye isihloko kwanele nzima. Ngakho manje sibheka blender ethandwa kakhulu "Witek".
Compact ukucwiliswa blender ngokuqinile Vitek VT-1480 kulula esikhundleni enkulu ukudla processor. It has a amandla motor 1000 Watts futhi 20 ngesivinini izindlela akuvumela ukuba ngokushesha nangokunembile usike, Chop noma puree e izithelo ezahlukene ithuba nemifino. Amafoni ifakwe umsebenzi ukushintshela ngokushelela. Ngokusekelwe ukubuyekeza, sibonga le ndlela, kungenzeka ukukhetha ijubane esifanele imikhiqizo ehlukene. Ngokwesibonelo, nzima isithako, umlomo wombhobho kufanele uphendukisa ngokushesha.
imodeli Ukuthola VT-1480
Blender "Vitek" lokhu imodeli zazihlanganisa 9 Imibhobho esemzimbeni. Nazi ezinye zazo:
ezimbili indlela drive wonke-metal uphelele shredding ushizi kanzima, imifino kanzima namantongomane;
Inhloko fries French ungakwazi kweso usike imifino yokuwugazinga kanye ngokungavamile alithumele etafuleni;
idrayivu esikhethekile pancake eyosisiza ukuba silungiselele izinhliziyo nenye inyama nengulube ngoba ukudla;
Shona ecubuziwe ngokushesha futhi ngaphandle izigaxa igedle imifino ehlukahlukene izithelo ukuze ukuvumelana lamazambane ecubuziwe.
Zonke izici zedivayisi zenziwa insimbi engagqwali, okuyinto ugwema ingress namagciwane ukudla. Ukuze omningi imikhiqizo esetshenziselwa endishini umthamo enkulu 1750 ml, ifakwe blender "Witek-1480." A chopper efanelekayo amancane, kubalwa ngalinye 500 ml i-izingxenye ezincane.
Okunye okufakiwe wokulinganisa inkomishi ivolumu 800 ml okuzokwenza ukukala ngokunemba esiphezulu inani izithako ivumela elula futhi uhlanganise nabo ukulungiselela Cocktails. Nge Corolla kalula yenza ukudla uketshezi ukungaguquguquki efanele.
ukuma kokunethezeka, ukuthatha isikhala kancane ekhishini, ivumela elula nendawo compact zonke Imibhobho esemzimbeni.
Umklamo ezikhangayo, senziwe kokungathathi hlangothi abamnyama, blender (intengo lesi simangaliso ubuchwepheshe in the uhla kusuka 4200 kuya ruble 7000.) Ingabe ezibukeka zingalungile stylish kudeskithophu yakho.
I yokuntula zihlanganisa yokuthi wonke amagiya ngaphakathi idivayisi eyenziwe ngepulasitiki ne-kungaba neziphephetha imithwalo ukuthi idlule ovumelekile esiphezulu ngumkhiqizi.
Babecwiliswa Blender VT-1478 W Ubuye yonke imisebenzi processor ukudla. umthamo Its 800 Watts, ngenkathi has a izindlela 5-ngesivinini. Blender "Vitek" lokhu ukuguqulwa ahlome nezinamathiselo ezilandelayo: beater ngoba ekubhaxabulweni, slicing disc, chopper, inkomishi wokulinganisa grater.
Izinzuzo imodeli kukhona umklamo, okusezingeni eliphezulu imikhiqizo isivinini yokugaya, kulula ukuyisebenzisa kokubili ekulungiseleleni yansuku zonke salads appetizers ngesikhathi belungiselela ebusika. I yokuntula zihlanganisa yokuthi cishe zonke izingxenye eyenziwe ngepulasitiki, nakuba izinga. Intengo Blender zokhahlamba kusuka ruble 3,500 ukuze 4,500.
Stylish ukucwiliswa blender VT-1477 GR kalula natret, nquma, gaya uhlanganise imikhiqizo ehlukahlukene. Isethi liqukethe: uphehle ngoba ekubhaxabulweni, slicing disc, shredder futhi grater ice.
Blender "Vitek" (okubuyayo mayelana umshini) unawo amandla Watts 700, nakuba has a isivinini 7 futhi Turbo. Umzimba eyenziwe ngepulasitiki okuhlala, nokucwiliswa umlomo wombhobho ingxenye futhi wenziwe metal. Chopper umthamo 1500 ml, okuyinto ukudlulisela inombolo ngokwanele enkulu izithako. Umthamo we beaker - 1250 ml, okuyilona elisebenzayo futhi kubalulekile ukwethula uwayehlalise othanda ukupheka.
kwamaphutha Serious atholakele kulolu chungechunge blender Vitek. Ngokuphathelene kokufaneleka, zingabantu, njengoba besho, kusobala. Intengo ye-blender ungaphakathi uhla ruble 5,000 ukuze 7,000.
Babecwiliswa blender Vitek VT-1455 BK ihlukile kwamanye amadivaysi yalesi brand ngwenya amandla ngokwanele eliphezulu 950 Watts, a izindlela 5-ngesivinini, khona Imibhobho esemzimbeni ezengeziwe elula futhi zisebenza kahle. Le kit kuhlanganisa: ummese grinder ezinkulu, ummese grinder encane, Imibhobho esemzimbeni nge ifaka amabili ahlukile disc ukuze a grater emihle kanye shredder esikhulu uphehle.
Compactness, yizinhlobonhlobo, izinga impahla, isivinini kanye nomthamo shredding, ibanga ngokwanele enkulu Imibhobho esemzimbeni izinjongo ezihlukile, lula ukusetshenziswa kanye isitoreji - Kuyinzuzo possessed blender. Intengo ezisukela 3500 ruble 5500. Kuyinto futhi usizakale ngaleli imodeli.
Izibuyekezo emizi abonisa ukuthi blender "Witek" - into edingekayo ekhishini.
Lo mdlalo "DotA 2": indlela yokufaka? Amathiphu mfuneko ebalulekile
I-Dolphinarium yeselula e-Irkutsk
Inkinga of ukubekezelelana: ubufakazi kusukela izincwadi. Kuyini ukubekezelelana: definition, omqondofana,
Yini enikeza lomshuwalense ukulahlekelwa umsebenzi? Lomshuwalense ukulahleka kwemisebenzi ngesikhathi mortgage